TCL TS6110, nzira yakachipa yekuvaka imba-theatre neDolby Audio | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 05/04/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 27/03/2021 19:57 | General, Reviews
Nekuuya kwe mabhawa kuburikidza nezviteshi HDMI uye nekushanduka kwayo nekumwe kuwirirana uye zvine hungwaru kugona kwezwi, ikozvino kupfuura nakare kose vashandisi vazhinji vanosarudza kukwirisa dzimba dzemitambo pamusha nemutengo unodhura, chimwe chinhu chaimbove, munguva ye "analog" chaive nechinhu chine mutengo unenge usingabvumirwe.
Mune ino imba tinoda kukuratidza mhando dzese dzesarudzo, uye kure nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo kusvika parizvino zvatakakuratidza muchikamu cheKumba-Cinema, Tinokuunzira kuongororwa kwakadzika kweiyo TCL TS6110 imba yemitambo soundbar, ngatione maitiro ayo uye ndeapi ayo akakosha maficha.
2 Kubatana uye kugadzirisa
3 Unyanzvi hunhu
4 Chiitiko chemushandisi uye odhiyo mhando
TCL chiratidzo chinozivikanwa muchikamu chema multimedia, kunyangwe isu takatoona nhare mbozha dzakatangwa nechiratidzo, chokwadi ndechekuti yakagara ichizivikanwa neterevhizheni yayo ine mutengo wakanaka wemari pamwe neyezvigadzirwa zveayo odhiyo. kuva avo nhasi vatisvitsa pano. Mune ino kesi TCL kugadzirisa mutengo kusvika pakakwirira hakuwanzo kupa dhizaini inogamuchirwa, uye ndozvakaitika neyuniti iyi yatakaedza.
Saizi yebara: 800 x 62 x 107mm
Saizi ye Subwoofer: 325 x 200 x 200m
Kurema kwebhawa: 1,8 Kg
Subwoofer Kurema: 3 Kg
Yakagadzirwa zvachose yepurasitiki nhema, ine machira ekuputira kumberi, ine inobata yakanaka pazasi kudzikisira kudengenyeka. Iyo yekumusoro chikamu ine inonzwika multimedia sarudza, nepo kuseri kwemachira pane LED pani yakavanzwa yemavara ayo anoratidza vhoriyamu uye mhando yekubatana. Kumashure kune mahukama atichataura nezvake gare gare. Saizi zvakare yakanyatsovharirwa iyo Sub, kunyangwe mune ino kesi iine huremu hwakajeka kupfuura bhaa rezwi uye mapads erabha kudzikisira kubatana.
Isu tinotanga nechikamu chekubatanidza, Chekutanga pane zvese, isu tinosimbisa kuti iro bharari rinosanganisira Bluetooth 4.2 isina waya yekubatanidza system, pasina kukanganwa chokwadi chekuti kubatana kwayo kukuru kunofanira kuuya kuburikidza neHDMI chiteshi kumashure kana, zvichikundikana izvo, iyo yekuteerera odhiyo yekuisa. Nekudaro, kune avo vane hutsinye hwakanyanya, chiteshi che USB chinosanganisirwa icho chichatibvumidza kuti tibatanidze masosi edhiyo uye kunyangwe chekare asi chisiri chidiki chaicho 3,5-millimeter AUX yekubatanidza.
Iyo Sub yechikamu chayo ine yakazara yakazara otomatiki uye isina waya kubatana neiyo barbar kuburikidza nekaviri kabhatani izvo zvinomira kupenya kana iko kubatana kwatanga. Izvo zvinotiponesa tambo, kwete tambo yemagetsi, inozove yakazvimiririra. Iyo yekumisikidza iri nyore, sezvo ichagara ichipa pekutanga kune odhiyo yekuisa kuburikidza neHTMLMI kubatana, zvisinei, zvichagara zvichidikanwa kushandisa bhaisikopo yekudzora kune mamwe ese mashandiro, kupfuura kukwidza uye kudzikisa huwandu hweterevhizheni, izvo zvatingaite nechero kutonga.
Inofanira kuonekwa kuti Mabhureki maviri akaverengerwa mupakeji iro rinotibvumidza kuti tishandure iro bharanzi kurira kumadziro pamwe nebepa rinozoshanda sechirongwa kana uchigadzira maburi anoenderana pamadziro. Chinhu chakatanhamara tichifunga nezve mutengo wemitengo mune chigadzirwa.
Tataura zvese zvataurwa pamusoro, tinotanga nekutaura izvozvo iyo HDMI yekubatanidza chiteshi ine ARC tekinoroji, hongu, isu tinoramba tiri mune iyo HDMI 1.4. Kune chikamu chayo, ichatibvumidza kudyidzana neterevhizheni kudzora zvakananga pane bhaa rezwi, pamwe nekutumira uye kugashira ruzivo pakati pemidziyo miviri, uye iwo mukana unozivikanwa. Kune chikamu chayo, iyi bharari haina chero yepamusoro waya isina waya yekubatanidza.
Tine 95db yakanyanya kukwana inowirirana nesimba rayo rakakura 240W Hazvina kushata kune bharari ine uremu hwakadzivirirwa zvakadaro. Padanho rekuenderana ratinahwo 5.1 virtualization inopihwa naDolby, chokwadi ndechekuti kunyangwe hazvo iro odhiyo rakapatsanurwa zvakanyanya kubva kumberi, kugona kuona kunoita basa rayo uye kunofadza zvisingaonekwe. Kunyange zvakadaro, iwo murairo unotibvumidza isu kusiyanisa pakati peatatu kuenzanisa pa-masisitimu kune chaiwo nguva senge: Cinema, TV nemumhanzi.
Chiitiko chemushandisi uye odhiyo mhando
Chinhu chakanyanya kukosha murudzi urwu rwechigadzirwa inogara iri mhando yeodhiyo, kunyanya patinotaura nezvemutengo wakaderera, kwatinogona kuwana chero chinhu. Ichokwadi ndechekuti pazasi pe150 euros iyi bharari inoenderana, kunyanya kune zvinowedzerwa. Iyo inotipa isu yakasarudzika uye yakazvimiririra mabass nekutenda kune yakazvimirira subwoofer, Chimwe chinhu icho munhu angatarisira kubva kune ichi chigadzirwa, zvisinei, ivo vanowanzo kuverengerwa nekuti mabass "anovhara" chaizvo zvimwe zvinokanganisa muhunhu hweaudio, chimwe chinhu icho munhu angatarisira.
Ruzha rwakati siyanei kana tichitaura nezve terevhizheni nemumhanzi, diki diki rekushomeka rinoshaikwa, wobva warangarira mutengo uye woyeuka kuti zvimwe zvishoma zvinogona kubvunzwa. Panyaya yekuburitswa kwemimhanzi, zvinonyanya kudzivirirwa, zvisinei, kana zvasvika pakutamba mafirimu mamwe mabass anogona kuvanza nhaurirano, uye izvo zvinonyanya kunetsa husiku, mune izvo kesi iwe unofanirwa kutamba neyakagadzirirwa nzira dzekumisikidza neiri kure.
Muchidimbu Isu tinowana chigadzirwa chakatenderedza tichifunga mutengo waro-wemhando, zvinotibvumidza kunakidzwa neimba yemitambo mumamiriro akanaka uye kunyange kuzvifadza neyakawandisa zvine mutsindo odhiyo. Dzimwe nzira shoma dzinouya mupfungwa mumutengo uyu wemitengo unosanganisira kukwira kwemadziro, yakasarudzika isina waya subwoofer, uye HDMI ARC. unogona kutarisa kuAmazon kubva ku150 euros, uye mune yako TCL webhusaiti.
Yakatumirwa pa: 5 April 2021
Zvakanakisa zvigadzirwa uye dhizaini
Kureruka kuri kuita kwekugadzirisa
Yakazvimirira subwoofer uye Dolby Audio 6 chaiyo
Rumwe ruzha runonzwika
Bass inogona kupindirana nhaurirano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » TCL TS6110, nzira yakachipa yekuvaka imba yemitambo neDolby Audio